काठमाडौं । नेपालमा मासिक आयात हुने १० लाख मोवाइल सेटमध्ये २ लाख ५० हजार सेट अवैध हुने गरेका छन् । अवैध बाटोबाट ल्याएर बजारमा पु¥याइएका यी मोवाइलको बिक्रीले सरकारको राजस्वमा मासिक करीब ७ अर्व घाटा भएको छ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा असुरक्षा भयो । कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नेभन्दा कानुन उलंघन गर्ने व्यापारीमध्ये कानुन नमान्नेको जीत हुने भयो । यसका दीर्घकालीन धेरै असर छन् । त्यसैले सरकार, आयातकर्ता, वितरक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै मिलेर अनधिकृत (ग्रे) मोवाइल फोनको विक्री बन्द गराउनु पर्छ । आज राजधानीमा नेपाल मोवाइल वितरक संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
मोवाइलको अनधिकृत (ग्रे) बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो — ‘अवको ३ महिनामा व्हाइट लिस्टिङ् सिस्टम कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक मोवाइल सेट प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।’
काठमाडौंको नयाँ सडक क्षेत्रमा मोवाइल सेटको अधिक विक्री हुन्छ । अनधिकृत सेट बिक्री हुने ठाउँ पनि यही हो । तीमध्ये अनधिकृत विक्री हुने ठाउँका बारेमा हामीलाई सूचना भयो भने निगरानी बढाउँछौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकका प्रमुख कर अधिकृत बिनोद लामिछाने भन्नुहुन्छ — ‘यसका लागि वृहत्तर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ यता त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सा कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासैनीकाअनुसार अहिले विमानस्थलबाट दैनिक करीव २ हजार व्यक्ति भित्रिनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये ५० प्रतिशत बढीले मोवाइल सेट लिएर आउने गर्नुभएको छ । यसरी ल्याइएका सेटहरु निर्वाध प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपाल र भारतका धेरै ठाउँमा खुल्ला सिमाना भएकाले फोनलगायत उपभोग्य सामानमा लुृकीछिपी तस्करी हुने गरेको ससस्त्र प्रहरीका डिआइजि गणेश खाडा मगर बताउनुहुन्छ ।
मोवाइल आयात संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राका अनुसार आ. व. २०७५÷०७६ मा मोवाइल आयातको व्यालेन्स सिट बराबर थियो । २०७६ ÷ ०७७ मा आएर शुन्य भयो । यसको कारण मोवाइल ल्याउने अबैध बाटो नै मुख्य कारण हो । मलहोत्रा लकडाउन अवधिको अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ — ‘नेपालसँगका नाका बन्द भएका बेला मोवाइल, ल्यापटपजस्ता सामाग्रीको आयात बढेको थियो । अहिले फेरि घट्न थालेको छ ।’
नेपाल मोवाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्पाद्यो, मोवाइल तस्करी रोक्ने कदम चलाउन ढिला भइसकेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । भारतमा सस्तो र नेपालमा महङ्गो भएकोले तस्करी बढेको हो । सरकारले मोवाइलमा लगाएको अन्तशुल्क हटाएर र विगतमा दिइएको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई नियमित गरेपछि मोवाइलको मुल्य सस्तो हुन्छ । चुल्पाद्योको जोड छ, सरकारको यो निर्णयले फोन भाउ सस्तो हृन्छ र तस्कर गर्ने ठाउँ टालिन्छ ।
नियमनकारी निकायले मोवाइल पसलमा राखिएका सेट मात्र हेरेर पुग्दैन । बेच्ने प्रयोजनका घर र गोदाममा भण्डारण गरिएका सेटको जाँच गर्नुपर्छ । मोवाइल वितरक संघका महासचिव रघु त्रिपाठी कडा अभियानले मात्र लक्ष्य हासील गर्न सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
नेपालमा २०५६ सालबाट मोवाइल सेवा र २०५७ सालबाट मोवाइल इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हो । २०६४ सालबाट सुरु भएको थ्रीजी सेवाको स्तरउन्नति गरेर अहिले अधिकांश सरमा फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छ । अहिले नेपालका करीव ६८ प्रतिशत मानिसले मोवाइलको र ६० प्रतिशत मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने अनुमान छ ।